समाचार – Khabaarpati
November 11, 2021 adminLeaveaComment on इथियोपियामा विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी गोरखाकी एकता अधिकारीको परिवारले क्षतिपुर्ती पाउने
काठमाडौ । इथियोपियामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने एकता अधिकारीका परिवारले क्षतीपुर्ती पाउने भएका छन् । उनी गोरखाको साबिक मिरकोट गाविस–३ की बासिन्दा थिइन् । २८ वर्षीया अधिकारीका बुवा काजी अधिकारी र आमा पार्वती मिरकोटबाट सरेर गोरखा नगरपालिका–१० छेपेटारमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु अहिले काठमाडौंको बालाजुमा बस्दै आएका छन् । दुर्घटना भएका बखत अधिकारीका […]
November 11, 2021 adminLeaveaComment on छठ मनाउने क्रममा महिलाको साडीमा आ’गो लाग्यो
काठमाडौ । छठपर्व मनाउने क्रममा दुर्घटना हुँदा एक महिला घाइते भएकी छन् । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको साहुजीपट्टीस्थित छठघाटमा दुर्घटना भएको हो । छठ मनाउने क्रममा साडीमा आ’गो लागेर महिला गम्भीर घाइते भएकी छन् । अवस्था गम्भिर रहेकाले महिलालाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । गएराति १० बजे छठघाटमा पूजाको दिप प्रज्वलन गर्ने क्रममा जलेश्वर नगरपालिका–६ […]
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी र सुरक्षाकर्मीबीच बिहिबार झडप भएको छ । झडपमा ५ जना कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरुमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेल, पूर्वउपध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, बार केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमनकुमार कर्ण र उच्च अदालत पाटन बार सदस्य मुकुन्द भट्टराई रहेको […]
November 11, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् कैलाली घटना प्रकरणका ८ जना आरोपित
कैलालीमा खु’क’री प्र’हा’र ग’रे’र युवकको ह’त्या ग’रे’को आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार राति टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित सिद्धार्थ होटल नजिक खु’कु’री प्र’हा’र ग’रे’र लम्कीचुहा नगरपालिकाका–१ का २३ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवालको ह’त्या ग’रे’को आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले लम्कीचुहा नगरपालिका–३ का […]
November 11, 2021 November 11, 2021 adminLeaveaComment on सवारी दुर्घटनामा ३० जनाको मुत्यु
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा तिहारलगत्तै ठूला दुर्घटना भए । यी दुई प्रदेशमा ७० वटा दुर्घटना हुँदा ३० जनाको ज्यान गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा आठ जनाको मुत्यु भएको छ । १५ देखि २१ कात्तिकसम्म भएका सवारी दुर्घटनामा परी ३० जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको तुलनामा […]
November 11, 2021 adminLeaveaComment on काठमाण्डौमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
काठमाडौं – राजधानी काठमाडौंको ग्वार्कोमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान ग्वार्काे चोकमा ना६ ख१९३३ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट बा३१ प ७५४ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक काभ्रेका सोप्निल लामाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका लामालाई उपचारका लागि बीएण्डबी अस्पताल लगिएको थियो । तर, […]
November 11, 2021 adminLeaveaComment on मारुती सुजुकीको सेकन्ड जेनेरेशन सेलेरियो सार्बजनिक, सुरुवाती मूल्य ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ
मारुती सुजुकीको निकै नै लोकप्रिय ह्याचब्याक कार सेलेरियोको सेकेन्ड जेनेरेशन बजारमा सार्बजनिक गरिएको छ । यो नयाँ कार एलएक्सआई, भिएक्सआई, जेडएक्सआई र जेडएक्सआई प्लस गरी ४ ट्रिम र ७ भेरियन्टमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । जसमध्ये बेस भेरियन्ट एलएक्सआईको मूल्य ४ लाख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नयाँ कारमा १.० लिटर क्षमताको […]
१२ दिनमै फेरि बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य, कुनको कति पुग्यो ? (विज्ञप्तिसहित)
November 11, 2021 adminLeaveaComment on १२ दिनमै फेरि बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य, कुनको कति पुग्यो ? (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेको छ। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य बढाइएको निगमले जनाएको छ। निगमले जारी गरेको सूचना अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यता, हवाई इन्धन (आन्तरिक तथा बाह्य)मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र […]
November 11, 2021 November 11, 2021 adminLeaveaComment on काङ्ग्रेस सभापतीसहित रातोभाले होटल बाट ६ जना पक्राउ, के गरे यस्तो ?
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बट्टारमा जुवाको खालबाट ६ जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् । बट्टारको रातो भाले नाम गरेको होटलबाट उनीहरुलाई मंगलवार राती साढे ७ बजेतिर ५८ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । प्रहरीले गोप्य सुचनाको आधारमा होटल संचालक राम शाहसहित अन्य ५ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ […]
मलद्वारमा लुकाएर आधा किलो सुन ल्याउने भारतीय नागरिक काठमाडौंमा प’क्राउ
November 10, 2021 adminLeaveaComment on मलद्वारमा लुकाएर आधा किलो सुन ल्याउने भारतीय नागरिक काठमाडौंमा प’क्राउ
काठमाडौं : मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको आधा किलो सुन सहित प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना भारतीय नागरिकलाई प’क्रा उ गरेको छ।फ्लाई दुवईको उडानमार्फत दुबईबाट आएका भारत उत्तर प्रदेशका महमद जुहेव लाई प’क्रा उ गरिएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए । दुबईबाट मंगलबार बिहान आएका उनले म’लद्वारमा लु’काएर सुन ल्याएका थिए। उनीसँग थप सुन भएको […]